Ny fisavoritahana amin'ny mari-pankasitrahana momba ny vaksininy dia manakana ny fanarenana ny dia
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Ny fisavoritahana amin'ny mari-pankasitrahana momba ny vaksininy dia manakana ny fanarenana ny dia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Aogositra 26, 2021
Ny fisavoritahana amin'ny mari-pankasitrahana momba ny vaksinina dia mety hanakana ny fanarenana ny dia
Ny tsy fahampian'ny firaketana nomerika any amin'ny firenena sasany, anisan'izany i Etazonia, dia mahatonga ny fanaovana vatan'ny vaksiny.
Ny vaksinina dia nantsoina ho toy ny mpanampy amin'ny dia ary fanantenana kely ho an'ny indostria.
Ny fitsipi-pifehezana sy ny tsy fahampian'ny fifanarahana ifanaovana dia manohy mametra ny dia.
Very hevitra ny mpandeha amin'ny fomba hanomezana ny satan'ny vaksiny.
Ny tsy fisian'ny rafitra fanamarinana vaksinim-panajana ekena iraisam-pirenena dia mety hanakantsakana ny famerenana amin'ny laoniny satria maro ny mpandeha no very hevitra momba ny fitakiana quarantine sy ny fameperana ny dia. Miaraka amin'ny fitsipika isan-karazany, ny sasany dia mety misafidy ny fitsangatsanganana an-trano, ka mahatratra ny toerana alehany, miankina amin'ny fitsidihana iraisam-pirenena.
Ny vaksinina dia nantsoina ho toy ny mpanampy amin'ny dia ary fanantenana kely ho an'ny indostria. Na izany aza, ny lalàna mizarazara sy ny tsy fisian'ny fifanarahana ifanaovana dia manohy mametra ny fivezivezena, miaraka amin'ny fetra fitsangatsanganana ho mpamono olona faharoa lehibe indrindra ho an'ny 55% amin'ireo olona voavaly tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka farany teo.
Very hevitra ny mpitsangatsangana momba ny fomba hanomezana ny satan'ny fanaovana vaksiny amin'ny fitsipika isan-karazany amin'ny toerana itodiana. Ho an'ny toerana sasany, ny mpitsangatsangana dia mila mitsambikimbikina amin'ny hoop maromaro hanamarinana ny satan'izy ireo, ary raha mandeha amin'ny firenena maro dia matetika no tsy mitovy ny fizotrany. Na dia toa nihena aza ny famerana, dia ho sakana hatrany ny fahasarotana amin'ny fanaovana vaksiny.
Ny firenena samihafa dia mibaiko fitsipika isan-karazany mba haseho porofon'ny vaksiny, manomboka amin'ny taratasy ka hatramin'ny firaketana nomerika. Ny firaketana nomerika dia tsy mora azo any amin'ny firenena sasany, ary hampisy saro-takarina ho an'ny mpandeha izany, izay mety hahatonga azy ireo hisaintsaina ny tetik'izy ireo.
Ny porofon'ny vaksiny dia toa fiheverana ny fanolorana vaksinina. Ny tsy fahampian'ny firaketana nomerika any amin'ny firenena sasany, anisan'izany i Etazonia, dia mahatonga ny fanaovana vatan'ny vaksiny. IatăNy pass pass de voyage dia noheverina ho vahaolana amin'ny indostria saingy tsy nety ny fandraisana an-tanana, ary voafetra ny fampidirana governemanta. Miaraka amin'ireo mpamatsy hafa miditra ao amin'ny habakabaka, dia namorona rafitra mizara roa mitaky ny mpandeha hametraka porofo ny tenany mba hiteraka pass digital. Ireo mpitsangatsangana dia afaka mivezivezy any amin'ny toeran-kaleha miaraka amina fitsipika mora kokoa na misafidy ny fitsangatsanganana an-toerana vokatr'izany ka tsy hahita mpitsidika ireo toerana itodiana.
Mila vahaolana tsotra izay tsy mila ezaka firy ny mpandeha. Ny indostria dia tokony hiara-hiasa amin'ny fampidirana vahaolana mety amin'ny mpandray anjara amin'ny indostria rehetra. Mandra-pahatongan'izany, ny sasany dia hiala amin'ny dia lavitra noho ny toetra sarotra anaporofoana ny maha vaksiny azy.
Raha tsy misy fepetra raisina atsy ho atsy dia mety hanafoana ny fangatahana iraisampirenena satria mety ho sarotra loatra ny mahazo ny lalàna ary mety hijanona ny fanarenana ireo toerana vokatr'izany.